ကမ္ဘာ့အလှူအတန်း အရက်ရောဆုံးနိုင်ငံရဲ့ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး တရားပွဲကြီး ယနေ့စမည်. – ရှအေလငျး
ကမ္ဘာ့အလှူအတန်း အရက်ရောဆုံးနိုင်ငံရဲ့ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး တရားပွဲကြီး ယနေ့စမည်.
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အကြီးဆုံး နှစ်သစ်ကူး တရားပွဲတော်ကြီး ယနေ့စမည်။ (ပြည်သူ့ရင်ပြင်)
၂၀၁၉ ဇန်နဝါရီ ၁ ရက်မှ ၃ရက် ထိ၊ နှစ်ဦးဓမ္ဓသဘင်တွက် ယခုအချိန်ထိလှူဒါန်းငွေများမှာ ၊သိန်းပေါင်း ၂၃၀၀ ခန့်၊ ဆက်လက်လှူဒါန်းကြလျက် ရှိပါသည်။
တရားနာ ပရိတ်သတ်အတွက် စတုဒီသာ ကျွေးမွေးမည့် တန်ဘိုး သိန်းပေါင်း ၁၅၀၀ ခန့် ရှိပါသည်။
လုံခြုံရေးအတွက် Security camera နှင့် anti-drone system တတ်ဆင်ထားပြီး ပြည်သူ့ရဲ ၂၈၆ ယောက် ဖြင့် လုံခြုံရေးတာဝန်ယူမည်။
မီးသတ်၊ကြက်ခြေနီ ၊ပရဟိတ လူအင်အား ၅၂၃ ခန့်နှင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ရန် ဆရာ ဆရာမ နှင့် အကူ အင်အား ၂၁၅ ယောက်၊ လူနာတင်ယဉ် ၁၁စီး ရှိပါသည်။
သွားလာရေးအဆင်ပြေရန်၊ မြို့နယ်အသီးသီးအတွက် အခမဲ့ Air Con bus 360 စီး နှင့် ပရဟိတ Taxi အစီး ၇၀၀ ခန့် က အခမဲ့ ဆွဲပေးပြီး ကုသိုလ်ယူကြမည်။
အထက်ပါအတိုင်း တရားနာပရိတ်သတ် အတွက် တရားပွဲဖြစ်မြောက်ရေး ကော်မတီက လူအား ၊ လုပ်အား၊ ငွေအားတို့ဖြင့်
ပြင်ဆင်လျှက်ရှိပြီး မြန်မာနှင့် ကမ္ဘာသို့ Live လွှင့်မည်ဟု သိရှိရပါသည်။
ရေးသားသူ – Thein Htoon
မွနျမာနိုငျငံရဲ့ အကွီးဆုံး နှဈသဈကူး တရားပှဲတျောကွီး ယနစေ့မညျ။ (ပွညျသူ့ရငျပွငျ)
၂၀၁၉ ဇနျနဝါရီ ၁ ရကျမှ ၃ရကျ ထိ၊ နှဈဦးဓမ်ဓသဘငျတှကျ ယခုအခြိနျထိလှူဒါနျးငှမြေားမှာ ၊သိနျးပေါငျး ၂၃၀၀ ခနျ့၊ ဆကျလကျလှူဒါနျးကွလကျြ ရှိပါသညျ။
တရားနာ ပရိတျသတျအတှကျ စတုဒီသာ ကြှေးမှေးမညျ့ တနျဘိုး သိနျးပေါငျး ၁၅၀၀ ခနျ့ ရှိပါသညျ။
လုံခွုံရေးအတှကျ Security camera နှငျ့ anti-drone system တတျဆငျထားပွီး ပွညျသူ့ရဲ ၂၈၆ ယောကျ ဖွငျ့ လုံခွုံရေးတာဝနျယူမညျ။
မီးသတျ၊ကွကျခွနေီ ၊ပရဟိတ လူအငျအား ၅၂၃ ခနျ့နှငျ့ ကနျြးမာရေးစောငျ့ရှောကျရနျ ဆရာ ဆရာမ နှငျ့ အကူ အငျအား ၂၁၅ ယောကျ၊ လူနာတငျယဉျ ၁၁စီး ရှိပါသညျ။
သှားလာရေးအဆငျပွရေနျ၊ မွို့နယျအသီးသီးအတှကျ အခမဲ့ Air Con bus 360 စီး နှငျ့ ပရဟိတ Taxi အစီး ၇၀၀ ခနျ့ က အခမဲ့ ဆှဲပေးပွီး ကုသိုလျယူကွမညျ။
အထကျပါအတိုငျး တရားနာပရိတျသတျ အတှကျ တရားပှဲဖွဈမွောကျရေး ကျောမတီက လူအား ၊ လုပျအား၊ ငှအေားတို့ဖွငျ့
ပွငျဆငျလြှကျရှိပွီး မွနျမာနှငျ့ ကမ်ဘာသို့ Live လှငျ့မညျဟု သိရှိရပါသညျ။
ရေးသားသူ – Thein Htoon
သင့်ရဲ့ ခန္ဓာဖြစ်စဉ်မှာ ဒါတွေဖြစ်လာရင် ဂရုစိုက်သင့်တဲ့ အချက်တွေ !!!
တပ်မတော်နည်းပညာ..တက္ကသိုလ်(DSTA).. ကျောင်းဝင်းနှင့် နောင်ချို...
တန်ဖိုးကြီးလှတဲ့ ဂုဏ်ပြုဆုတစ်ခု ထပ်မံချီးမြင့်ခံလိုက်ရပြန်တဲ့ ဖြိုးမြတ်အောင် 😱😱